Ny antony dia noho ny fisian’ny fihodinana faharoa. Nampitomboina ny isan’ireo mpandraharaha sy mpitsara ny fanadinana, hoy ny fanazavan-dRtoa Blanche Nirina Richard, minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika nandritra ny fitsidihana nataony tetsy amin’ireo foibem-panadinana LMA sy LTC Ampefiloha nanatanterahana ny fanadinana Bakalôrea teknika sokajy faharoa izay nanomboka omaly. Mamdritra ny efatra andro ny fitsarana ary miditra amin’ny 7ora maraina hatramin’ny 5ora hariva. Efa eo am-pamolavolana ny laza adina Bakalôrea 2 eme session ihany koa ireo tompon’andraikitra amin’izao raha ny fanazavany hatrany. Hanomboka ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra ho avy izao kosa ny fanadinana, entina hanampiana ireo sanatria hanao ny tsy ambinina. Ho hentitra ny fanaraha-maso hataon’ity minisitera ity. Tsara ny mampahatsiahy fa andro vitsy monja no hanaovan’ny mpianatra tsy afaka bakaôrea fialantsasatra amin’ity taona 2019 ity. Ny 28 oktobra ho avy izao mantsy no hanomboka ny fidirana ofisialy ho an'ny sekolim-panjakana araka ny navoakan'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika. Ny 23 hatramin'ny 26 oktobra kosa anefa ny fihodinana faharoa ho an’ireo mpiadina tsy afa-panadinana Bakalôrea, izany hoe tsy mivaly akory ity fanadinana farany ity dia hanomboka indray ny taom-pianarana vaovao manaraka.